अर्जुनधारा एमालेको गढ हो, सूर्य चिन्हले चुनाव जित्छ : बलदेव गोम्देन « तपाईंको साझा इजलास
पूर्वी झापाको एउटा राजनीतिक भूमि हो, अजुर्नधारा नगरपालिका । वर्गीय मुक्तिका लागि झापामा किसानहरुलाई जगाइरहेका युवाहरुलाई जेल सार्ने बहानामा यही नगरपालिकाको उत्तरी सिमा सुखानीमा लगेर हत्या गरिएको थियो । आज पनि एमालेको इतिहासमा सुखानी हत्याकाण्डका नामले चर्चित यो ठाउँ झापाको अजुर्नधारा नगरपालिका र इलामको माई नगरपालिकाको सिमानामा पर्दछ ।
सुखानीको सहिद स्तम्भ, सुखानी सहिद पार्क यही नगरपालिकामा पर्दछन् । त्यसैले यो नगरपालिकालाई झापा आन्दोलनको उद्धगम थलोको रुपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । यस नगरपालिकाको मेयर एमालेको प्रतिष्ठा र सुखानीको विराससँग जोडिएको पद हो । विगतको निर्वाचनमा पनि एमलेले विरासत जोगाएको थलो हो । त्यही विरासत जोगाउने जिम्मा यसपाली एमालेले बलदेव गोम्देनलाई दिएको छ ।
युवा नेता गोम्देन यसअघि वडा नं १० को वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । अजुर्नधारा एमालेको विरासतसँग मात्र सम्बिन्धत छैन । यो एउटा पौराणिक धार्मिक स्थल पनि हो । यहाँ महाभरातको युद्धमा यहाँ अर्जुनले पानी खाएको हुनाले यस ठाउँलाई अर्जुनधारा भनिएको भन्ने किंवदन्ती छ । राजनीतिक,धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको अर्जुनधारा नगरपालिकाको नेतृत्व अब गोम्देनले गर्ने उत्साहका साथ चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ ।
दुई दशक भन्दा बढी झापा जिल्ला र अर्जुनधाराको पार्टी काम सहित निरन्तर क्रियाशिल सामाजिक क्षेत्रमा जोडिएका गोम्देन सर्वाधिक चर्चित युवा नेताका रूपमा पहिचान बनाउन सफल हुनु भएको छ । बहुदलीय राजनीतिको जगबाट राजनीतिक जीवन आरम्भ गरेका अर्जुनधारा नगरपालिका वडा–१० को सफलतापूर्वक अध्यक्ष समालिसक्नु भएका गोम्देनले विभिन्न कामको सन्दर्भमा सिङ्गापुर, दुवई, पाकिस्तान, भुटान र भारत सहित नेपालका विभिन्न स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययन÷अवलोकन र अनुभव आर्जन गर्नुभएको छ । विषयवस्तुमा स्पष्ट कमाण्ड सहित सार्वजनिक जीवनमा समेत पेस हुने उहाँले तीन दर्जनभन्दा बढि सामाजिक संघसंसंस्थाको कुशलतापूर्वक नेतृत्व समालिसक्नु भएको अनुभव छ ।
तत्कालिन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघबाट राजनीतिक जीवन सुरुवात गर्नुभएका गोम्देनले संघको झापा जिल्ला कमिटी सदस्य, नेकपा एमालेको निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी वहन गरिसक्नुएको छ । हाल पार्टीको अर्जुनधारा नगर कमिटीका अध्यक्ष रहनुभएका उहाँ सांगठनिक जिम्मेवारी भन्दा निकै फराकिलो पहिचान राख्नुहुन्छ । कालीस्थान माविको तीन कार्यकाल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, शनिश्चरे बहुमुखी क्याम्पसको संस्थापक संचालक समिति सदस्य, तत्कालिन पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समितिको सदस्य, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प शनिश्चरे भवन निर्माण समिति अध्यक्ष, उज्यालो यातायात संघको पूर्व अध्यक्ष, वन पैदावर व्यवसायी संघ झापा जिल्ला दुई कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य, फुटबलको पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी समेत रहनुभएका उहाँ जिम्मेवारी बहन गर्ने र कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने नेताको कोटीमा गनिनुहुन्छ ।
सक्रिय राजनीतिमा संलग्न दुई दशकभन्दा बढि लामो जीवनकालमा आजसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारी हुँदा होस या नहुँदा सधै जनप्रिय रहर्दै आउनुभएको छ । यसबीचमा मनमोहन अस्पताल, अर्जुनधारा जेसीज संस्थापक कानुनी सल्लाकार, पूर्वेली कलाकार संघ प्रमुख सल्लाकार, कालीका पिठको प्रमुख सल्लाकार, जेठो गुम्बाको प्रमुख सल्लाकार, झापा–११ को संस्थापक सल्लाकार, झापा जिल्ला कराँते संघको सल्लाकार, सितोरियो मानार्थ ब्ल्याक बेल्ट , उसु संघ झापाको सल्लाकार, मेची ट्याक्सी परिवार, पूर्वाञ्चल ट्याक्सी व्यवसायी संघ, एम्स एकेडेमीको प्रमुख सल्लाकार, प्रगति अग्रेजी माविको सल्लाकार समेत समालेको अनुभव छ ।
सभा, सम्मेलन र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक–बैचारिक विषयमा आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न सक्ने अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. १० कालीस्थान निवासी उहाँलाई झापाबासीले आशलाग्दो युवा नेताका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । अर्जुनधारा नगररपालिका–१० स्थित कालीस्थान झापामा २०३१ साल चैत्र १४ गते आमा कमला र बुबा दिपक कुमार गोम्देनको कोखबाट जन्मनुभएका गोम्देन सरल, सादगी र मिलनसार स्वभावका हुनुहुन्छ । यसै सन्दर्भमा आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा इजलास दैनिकका लागि पत्रकार सागर गौतमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
१, मेयरको टिकट पाएपछि अनुभूति कस्तो अनुभूति भएको छ ?
म भन्दा धेरै पहिेलेदेखि यो आन्दोलनमा जोडिनुभएका, संसदीय मोर्चामा समेत म भन्दा धेरै अनुभव हासिल गर्नुभएका थुप्रै सिनियर कमरेडहरु अर्जुनधारामा हुनुहुन्छ । वहाँहरु अत्यन्तै स्वभाविक रुपमा नगर प्रमुखको दावेदार हुनुहुन्थ्यो तर सिनियर कमरेडहरुले नै सर्वसम्मत रुपमा मेरो नाम प्रस्ताव गर्नुभयो । खुशी लागेको छ । नेताहरु र पार्टीका सहयोद्धाहरुको म प्रतिको यत्रो ठूलो विश्वास र भरोसालाई आँच आउन नदिने निकै गरुङ्गो चुनौति ममा थपिएको अनुभूति गरेको छु ।
२, टिकट कसरी पाउनुभयो ?
हाम्रो पार्टीमा योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता र जनता माझको लोकप्रियतालाई हेरेर उम्मेदवार चयन हुन्छ । पार्टीको वफादार सिपाहीको रुपमा मैले गरेको काम, एक कार्यकाल वडाध्यक्षको रुपमा पार्टीले देखेको मेरो कार्यक्षमता र अनुभव अनि म माथि विश्वास गरेर यहाँका सिनियर कमरेडहरुले देखाउनुभएको त्यागको कारण उम्मेदवार बन्न सफल भए जस्तो लाग्छ ।
३, तपाई विजयी बन्ने आधार के–के छन् ?
हजारौं योग्य कार्यकर्ताहरुको बीचबाट नगरप्रमुखको उम्मेदवार सर्वसम्मत रुपमा चयन गरिसक्दा नै हामीले निर्वाचन आधा त जितिसक्यौं भन्ने लागेको छ । बाँकी आधा हामी बैशाख ३० गते जित्नेछौं । अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई हेर्दा हामी एक्लै पहिलो दल हौं । यो पाँच वर्षमा हाम्रो पार्टी र जनसंगठनहरु नगरका ५५ वटै टोलहरुमा व्यवस्थित रुपमा निर्माण भएका छन् ।
नेकपाको निरन्तरताको रुपमा पूर्व माओवादीका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरु हामै्र पार्टीमा अहिले संगठित हुनुहुन्छ । नयाँ थपिएका युवा मतदाताहरु उत्साह साथ एमालेलाई जिताउने अभियानमा हुनुहुन्छ । एमाले विभाजनको असर यहाँ नगन्य मात्र छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुबाट विकास र समृद्धि एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ भन्ने यहाँका मतदाताले बुझिसक्नुभएको छ । यी सबै दृष्टान्तका आधारमा अर्जुनधारा जस्तो एमालेको गढमा सूर्य चिन्हले नजितेर अरु कसले जित्छ त ?नजितेर त्यसकारण ०७४ को निर्वाचनमा भन्दा अझै फराकिलो अन्तरले हामी निर्वाचन जित्दैछौं ।
४, अर्जुनधारामा गठबन्धनको प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हो । ०७४ को निर्वाचनमा सबै दलहरुको मत जोड्दा समेत हाम्रो बराबर थिएन । ०७४ यता अन्य पार्टीका थुप्रै कार्यकर्ताहरु हाम्रो पार्टीमा आवद्ध भइसक्नुभएको छ । हाम्रो संगठन थप व्यवस्थित बनेको छ । पार्टी भित्रको एकमना एकता अझै खँदिलो बनेको छ । नयाँ मतदाताहरु हाम्रो पक्षमै हुनुहुन्छ । त्यसकारण गठबन्धन अर्जुनधारामा जित्नका लागि होइन, सम्मानजनक दोस्रो मतको लागि हो भन्ने लागेको छ ।
म त उहाँहरुलाई हिम्मत भए एक्लै एमालेसँग भिड्न आउनुहोस् भनेर भन्दिन, बरु मिलेर सम्मानजनक मत ल्याउन शुभकामना दिन्छु । लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ । एक्लै बलियो बन्न नसक्दा मिलेर बलियो प्रतिपक्ष बनाउने वहाँहरुको प्रयासको म सराहना नै गर्छु । अर्जुनधारा नेकपा एमालेको विरासतसँग जोडिएको नगर हो । सुखानी हत्याकाण्ड यतैतिर भएको हो । सुखानीको विरासत कसरी जोगाउनुहुन्छ । एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो । आज हामीले एमाले भनेर जुन गर्व गर्ने मौका पाएका छौं त्यसको इतिहास सुखानीसँग जोडिएको छ ।
त्यसैले म सर्वप्रथम झापाली किसानको मुक्तिका लागि आफ्नो ज्यान दिनुहुने सुखानी सहिदहरु क.रामनाथ दाहाल,क.नेत्र घिमिरे,क.वीरेन राजवंशी,क.नारायण श्रेष्ठ र क.कृष्ण कुइँकेललाई हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । साथै उहाँले देख्नु भएको समृद्ध नेपाली जनताको सपना पुरा गर्न म यो गर्विलो राजनीतिक भूमीबाट दृढ संकल्प पनि गर्दछु ।
हाम्रा लागि अर्को गौरवको विषय पनि छ । झापा आन्दोलनका एक अभियान्ता नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले देशको सवभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले त्यसबेला देखेको सपना,उहाँले त्यस बेला कल्पना गरेको सुखी र समृद्धिको मार्गचित्र पूरा गर्न मेरो भागमा पर्ने जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा पालना गर्दछु ।
श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसै झापा जिल्लाको हुनुहुन्छ । त्यस कारण पनि उहाँले देखेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिह आकांक्षालाई पुुरा गर्ने दायित्व हामी झापाली झन् प्रतिनिधीको काँधमा झन् बढी छ । त्यसैले फेरी पनि उनै सुखानीका सहिदलाई साक्षी राखेर प्रतिज्ञा गर्दछु अर्जुनधाराबासीले मलाई मतदान गरे बापत कहिले पनि पछुताउनु पर्दैन । सधैं गौरव गर्ने वातावरण बनाउछु ।
५, तपाईका चुनावी एजेण्डा के छन् ?
पाँच वर्षपछि हाम्रो नगर कस्तो बनाउने भन्ने बारे हामीले छलफल गरेका छौं । हाम्रो स्थानीय प्रतिबद्धता पत्रमा हाम्रा योजनाहरु विस्तृत रुपमा आउँछन् नै । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडक, पुल, तटबन्धन, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुलाई तपाईंले पाँच वर्षमा निकै फरक रुपमा पाउनुहुनेछ ।
विपन्नहरुलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण, जनस्वास्थ्यमा विषादीले पारेको प्रभाव न्युनीकरण, स्वस्थ जीवनशैली र खेलकुद, कला सँस्कृतिको संरक्षण र विकास, अर्जुनधारको पहिचान दिलाउने ब्रान्डिङ्ग सहितका कृषिमा आधारित उद्योगहरु, बालबालिकाहरुको क्षमता विकास, कुलत हटाउने अभियान, पारदर्शिता र सुशासन, चुस्त र सहज न्याय सम्पादनमा हामी जोड दिनेछौं । मुख्य रुपमा यहाँका मजदुर र किसानहरुको जीवनस्तर कसरी माथि उकास्न सकिन्छ र स्थानीयस्तरमा रोजगारीका व्यापक अवसरहरु कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रा योजनाहरु केन्द्रित हुनेछन् ।
६, अन्त्यमा केही छन् ?
सबै अर्जुनधाराबासी आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीका चुनाव चिह्न सूर्यमा मतदान गरी पार्टीको नीति र योजना अनुसार तपाईंहरुकै सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोेध गर्दछु ।
आफूले दिएको अमूल्य मतमाथि गर्व गरिरहन पाउने अवस्था हामी बनाउने छौं । म लगायत मेरो टिमका सबै सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवारहरुलाई अत्याधिक मतले विजय गराई प्रकृति र सँस्कृतिको धनी हाम्रो नगरपालिकालाई समृद्ध नगर बनाउने अभियानमा जुट्नुहुन म सबैलाई अपील गर्दछु । वैशाख ३० गते दुनियाँ छक्क पर्ने गरी विकास र समृद्धिको पक्षमा अर्जुनधाराबासीको अभूतपूर्व एकतालाई जनमत मार्फत् प्रकट गरिदिन म सबै मतदाताहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।
प्रकाशित मिति : बैशाख १२, २०७९ सोमबार ८ : ४७ बजे